Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2008 December 07
07 Desambra 2008
Tantara tamin'ny 07 Desambra 2008
Lahatsary: Sary manao ahoana no hanokatra ny masonao hiaro ny zon'olombelona?
Mpanoratra Juliana Rincón Parra ·
Hankalazaina amin'ny 10 desambara ho avy izao ny faha_60 taona ny fanambarana ny zon'olombelona, ary ny ekipan'i Witness'The Hub dia nametraka lahatsary iray hamaliana ny fanontaniana: Sary manao ahoana no hanokatra ny masonao hiaro ny zon'olombelona? Efa aty amin'ny serasera moa amin'izao fotoana izao ny lahatsary (hataoko hoe Volongana) ka...
Philippines: Bolongana nampiseho zava-mahavariana
Mpanoratra Karlo Mongaya ·
Any amin'ny firenena izay tsy mitsahatry ny mihena isan-taona ny tetibola atokan'ny fanjakana ho amin'ny fampianarana, dia maresaka fandre isaky ny fidiran'ny taon-tsekoly ny tsy fahampian'ny trano sekoly, na dabilio, na seza ankoatra ny zavatra hafa maro ihany koa. Mba enti-mamaha olana izany tsy fahampian'ny fitaovan-tsekoly izany dia voatery miankina...
India: Ry Isiraely malala, tiavo i Kashmir
Mpanoratra Maya Norton ·
False Dichotomies an'i Alex Stein no ao nahazo taratasy iray avy any Kashmir, Misaotra azy noho ny nitaterany ny vaovao tany Mumbai (Bombay). Toy izao no vakiny: “Noraisina ary horaisina tsara hatrany ny Jiosy eto Kashmir. Raha ny marina, tamin'ny 1991 raha nataon'ny mpitolona Pakistaney takalon'aina ny jiosy dia vondrona...
Bangladesh, India: Sary momba ny fiainan'olona serôpôzitifa
Mpanoratra Rezwan · Amerika Avaratra
Mpanao gazety mpaka sary malaza Bengali Shahidul Alam no manao tamberina ny asan'i Dayanita Singh, mpaka sary Karana iray efa nadrombaka ny amboara tamin'ny fakana sary. Maneho ny “Fiainana serôpôzitifa” mitondra ny tsimok'aretina VIH na “Positive Lives”, fampirantiana ny setriny ataon'ny olona momba ny VIH/SIDA moa izany tamberina izany.